Izimo zethu zihluke kakhulu okuphansi umsindo uhlobo - China Ningbo Hicon Imboni
Ceiling Marine ezifihlakele ikhoyili Fan Unit Hisurp aklame uchungechunge ezihlukahlukene Fan Ikhoyili Unit ukuqinisekisa isimo ephezulu grade ngaphansi imvelo yasolwandle. Kusukela enkulu imikhumbi encane yomthengisi, onobuhle ezahlukene ziyatholakala izicelo, wanelise anhlobonhlobo edingekayo Ukupholisa amakhono kanye imithombo yamandla esetshenziswa emhlabeni wonke. Le ndawo ubuchwepheshe professional unika Hisurp onqenqemeni ehola kulo mkhakha ibhizinisi. Lokhu ovundlile ezifihlakele fan ikhoyili uchungechunge lakhiwe ukuze ac ...
Ceiling Marine ezifihlakele ikhoyili Fan Unit
Hisurp aklame uchungechunge ezihlukahlukene Fan Ikhoyili Unit ukuqinisekisa isimo ephezulu grade ngaphansi imvelo yasolwandle. Kusukela enkulu imikhumbi encane yomthengisi, onobuhle ezahlukene ziyatholakala izicelo, wanelise anhlobonhlobo edingekayo Ukupholisa amakhono kanye imithombo yamandla esetshenziswa emhlabeni wonke. Le ndawo ubuchwepheshe professional unika Hisurp onqenqemeni ehola kulo mkhakha ibhizinisi.
Lokhu ovundlile ezifihlakele fan ikhoyili uchungechunge lakhiwe ukuze kuzuzwe induduzo esiphezulu nge esiphezulu ukusebenza kukagesi umsindo neze ukuthola ngenqubo evamile emoyeni esibulalayo amayunithi (yokuhlukanisa, umlandeli ohlobo). ukusebenza kwalo kwenza kube umkhiqizo ekahle yimuphi ukufakwa okudinga ukuthobela imithetho okuqinile amazinga omsindo. Lolu cwaningo ngokucophelela a plenum ihlanganiswe suppressor nokusetshenziswa ethile ekuvikeleni impahla (kabusha i-polyester fibre) eliphezulu umsindo iyavuleka amandla.
ukuqina Excellent eziklanyelwe izicelo zasolwandle
Khanyisa isisindo design
Wide operation ububanzi
Okuchichimayo ukuguqulwa izingxenye usiqinisekisa izicelo ahlukahlukene
zokuthutha lula futhi ukufakwa umsebenzi
Engagqwali ukuvuza pan ne 25mm ukuphakama
- Zonke imikhumbi kungakhathaliseki amasha noma elidala
- amayunithi amancane ngoba gumbi kanye injini Igumbi
Olandelayo: Floor Standing
Marine Ekupholiseni Fan Amakhoyili
Marine Fan Ikhoyili Unit
Marine Fan Amakhoyili
Marine Oluphakhejiwe Fan Ikhoyili Unit
Imvume yesabelo sogu Fan Ikhoyili Unit